Atụmatụ na usoro maka Olee otú iji weghachite Data si iCloud ndabere File
Mkpa weghachite ọmụma si iCloud ndabere faịlụ gị iOS ngwaọrụ? Tupu ị na-download na ya, ga-amasị m atụ aro ka ị na-ahọrọ nri ụzọ ime ya. E nwere ọtụtụ ụzọ iji weghachite data si iCloud. Ejila okwu m maka ya? Ego ndị na-esonụ ọmụma:
Part 1. Ụzọ iji weghachite Data si iCloud ndabere File Part 2. mere ndị mmadụ ji Kpọọnụ iCloud? Part 3. Ị Na-atụ Anya Mma iCloud Services?
Part 1. Ụzọ iji weghachite Data si iCloud ndabere File
Nwere furu efu ụfọdụ data na gị iOS ngwaọrụ ma na-achọ iji weghachite data si iCloud ndabere faịlụ? Ma ọ bụ furu efu gị iOS ngwaọrụ ma na-achọ na-esi gị mkpa onye data si iCloud ndabere faịlụ, otú i nwere ike na-etinye ha ndị ọzọ ntị ma ọ bụ mbadamba maka ojiji? Ok, ị kwesịrị ị na-ahọrọ nri ụzọ iji weghachite data si iCloud ndabere faịlụ dị ka ọnọdụ gị.
Ọnọdụ # 1: Ị ehichapụ ụfọdụ data na gị iOS ngwaọrụ na chọrọ inwe ha azụ site na iCloud ndabere faịlụ ma ọ bụ data na gị iOS ngwaọrụ dị nnọọ efu enweghị ihe ọ bụla yiri ihe ndị mere.
Ngwọta: Na nke a, ị kwesịrị ị na weghachi data si iCloud ndabere faịlụ gị iOS ngwaọrụ. Iji mee nke a, pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na na ntọala gị na iOS ngwaọrụ. Mgbe ahụ, na ntuziaka na gị iPhone, họrọ Weghachi si iCloud ndabere> gị banye iCloud Apple ID> ahọrọ a ndabere faịlụ iji weghachi data site na ya.
Cheta na: Site n'ime nke a, ndị niile data na gị iOS ngwaọrụ ugbu a ga-ehichapu ya. Old data gị iCloud ndabere faịlụ ga-ejupụta gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ dị mkpa data na gị iOS ngwaọrụ, ị kwesịrị ị na-atụgharị usoro ẹkenam ke ọnọdụ 2.
Ọnọdụ # 2: The ihuenyo nke m iPhone mebiri emebi. M nwere ike iji ya ọ bụla ọzọ. Na m njikere ka ịgbanwee gaa na ihe gam akporo ngwaọrụ. Olee otú m weghachite data si iCloud? M mkpa iji nweta foto m, kọntaktị, ndetu, na ozi ederede azụ iCloud.
Ngwọta: N'ọnọdụ na i nwere ike iji gị iOS ngwaọrụ, sị gị iOS ngwaọrụ na-agbajikwa ma ọ bụ zuru, ị ga-enwe ike iji ụzọ Apple nyere iji weghachi data si iCloud. Dị nnọọ ka ndị a data na iCloud arahụ. Ụzọ adịghị. Gbalịa Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake) ka iṅomi gị iCloud ndabere faịlụ, adịrị ndị a bara uru data maka gị. Mgbe ahụ, ị nwere ike zọpụta ndị a data na kọmputa gị. N'ihi na foto, kọntaktị, videos, songs, na ndị ọzọ, ị ga-enwe ike itinye ha na gị na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na Wondershare MobileGo for Android. Dị ka WhatsApp chat akụkọ ihe mere eme, iMessages, ederede ozi, ị nwere ike mbupụ ha dị ka printable faịlụ Ọkpụkpọ.
Nzọụkwụ 1. Launch Wondershare Dr.Fone maka iOS na-ahọrọ "naputa site na iCloud ndabere File".
Nzọụkwụ 2. abanye na na gị iCloud akaụntụ ma họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị mkpa ibudata. Na mmapụta window, ị dị nnọọ mkpa ibudata data gị mkpa. Nke a ga-azọpụta unu oge kemgbe ị maara, ihe dum iCloud ndabere faịlụ bụ nnọọ nnukwu.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na omume na-ịgụ isiokwu gị iCloud nkwado ndabere na mpaghara sorting data nkenụụdị. Mgbe Doppler, ị nwere ike pịa data ụdị na ekpe sidebar ka ịhụchalụ kwekọrọ ekwekọ faịlụ ma ọ bụ data. Ego chọrọ data na pịa Naghachi iji weghachite ọmụma si iCloud.
Download ikpe mbipute inwe a na-agbalị!
Atụmatụ & Aghụghọ: Ọ bụrụ na ị furu efu na kọntaktị na chọrọ iji weghachite kọntaktị site na iCloud ndabere faịlụ, e wezụga Iweghachi niile data site na iCloud ndabere faịlụ, ị nwere 3 ọzọ nhọrọ, dị ka mmekọrịta kọntaktị niile si iCloud gị iOS ngwaọrụ mgbe adreesị akwụkwọ iCloud agụnye kọntaktị i na-na na na-efu. Lelee Olee otú iji weghachite kọntaktị site na iCloud >>
Mgbe na-achọ maka otú naghachi data si iCloud, mgbe ụfọdụ, ị ga-ewere ụdị nke data echiche. M pụtara ụzọ iji weghachite dị iche iche ụdị data dị iche iche. I nwekwara ike pịa ekpe navigation mmanya na ego kpọmkwem isiokwu maka otú otú naghachi faịlụ site na iCloud
Part 2. mere ndị mmadụ ji Kpọọnụ iCloud
Mgbe iCloud ẹkenam site Steve Jobs, ọ pụtara "dị nnọọ na-arụ ọrụ." Ọ na-ahuta ka a kpokọtara na ngwa na-eradicates ntọala menus na faịlụ usoro na ihu ọma nke akpaaka, na-eme ihe niile eme-akpaghị aka. Otú ọ dị, o yiri iCloud na-arụ ọrụ dị nnọọ ụzọ ọzọ gburugburu. Ndị mmadụ na mkpesa nke adịkwa data-atọ ndị ọzọ mmepe chọta ọ bụ ike iwekota ha na ngwa.
1. m kpọrọ asị iCloud ukwuu n'ime n'ihi na mgbe m ite ke iCloud, ọ ehichapu niile ọhụrụ m ndetu na dochie na-enweghị ihe ma ọ bụ ọtụtụ ndetu na iCloud. M gbalịrị ka m ndabere ndetu na iCloud, ma, ọ bụghị ka ihe ga-aka mma. (Ị pụrụ mkpa ịnọgide bịanyere aka na na ndetu ndabere ọrụ n'aka na)
2. iCloud nwere ike ghara inwe m niile foto zigara ọhụrụ m iMac
3. Ọ na-eme mgbe niile na ndị niile na data dị nnọọ arahụ, iCloud dị nnọọ ehichapu ha, na-enweghị ihe ọ bụla prediktebul ihe. E nweghị ohere iji nweta ya laghachi azụ.
4. Ntak apụghị Apple eme ya ka ọ ga-ekwe omume nwere m niile foto na a nchekwa iCloud, otú m nwere ike mfe ibudata ha ka ha na kọmputa m?
5. Ọ bụrụ na ị nwere nwunye, ụmụaka, wdg na otu Apple akaụntụ mgbe ahụ ị ga na-na-ọ bụla ọzọ si stof na ekwentị gị.
6. My ozi ederede na-igosi na m niile mpụga ngwaọrụ. The Ihọd onye nwere ịzụta m iPod aka na eBay nwere ike ịgụ m niile ozi na-eme :( [Ị mkpa iji Wondershare SafeEraser na tọgharịa gị iPhone]
7. Nke a bụ ihe na-akụda ahụmahụ. Akababiat m kalenda, na iCloud ugboro niile nọ na-ezighị ezi na m furu efu mmekọrịta m nile ngwaọrụ ndị ọzọ. Olileanya na-adịghị. Ọ ọfọnde Outlook na profaịlụ ma m nwere ịrụzi profaịlụ.
8. m ike weghachi data si iCloud ndabere faịlụ ebe m zụtara a ọhụrụ iPhone. Mgbe m nwara ya, ozi popped elu, si "e nwere ezughị ohere". n
9. m hụrụ iCloud ndabere abaghị uru. Ị na-ahụ, ọ bụla nke abụọ m na-eji ekwentị m, ọhụrụ data na-eme. Ọ bụrụ na m chọta ụfọdụ data efu na-agbalị iji weghachi m iPhone na otu iCloud ndabere faịlụ, ndị ọhụrụ data na m iPhone ga-ehichapu ya. Ntak apụghị Apple dị nnọọ ụdị nile data kwadoo na iCloud nkenụụdị, ikwe ọrụ iji weghachi a data selectively?
Part 3. Ị Na-atụ Anya Mma iCloud Services?
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ narị ọdọhọde banyere iCloud, ị ka nwere ike kwụsị iji ya, nri? Ọ na-atụ anya ga-ihe magburu onwe ọrụ ka mmekọrịta na nkwado ndabere data. Ka Kwụsị ime mkpesa, ma na-agwa ihe anyị na-atụ anya na ọ ga-. Ndị na-esonụ bụ a nghoputa maka ma na-amasị nke ugbu a iCloud ma ọ bụ na ihe ị na-atụ anya iCloud na-adị. EME unu nụrụ olu !!!
2 Ụzọ naghachi ozi ederede site na iCloud
Chọta mkpa ozi ederede na gị iPhone na-efu? Echegbula onwe gị, ọ bụrụ na ị kwadoo gị iOS ngwaọrụ ke iCloud, n'ihi na n'aka, ị na-aga na-agbake niile ehichapụ ma ọ bụ na-efu ozi ederede site na iCloud ndabere faịlụ. Ma tupu ị na-eme, e nwere obere atọ i nwere ike ịgbalị na gị iOS ngwaọrụ ịhụ ma ndị a na-ehichapụ Ederede ka e nwere:
Enweta Ozi ẹkedori ya. Mgbe window emepe, pịa New ozi na akara ngosi na nnọọ n'elu nri. Na New ozi window Iji ebe, pịnye aha kọntaktị na-efu. Ọ bụrụ na ị nwere anya cache, eleghị anya ị na site n'ime nke a, ị pụrụ ịhụ ozi ederede na na-efu. Otú ọ dị, otú a ka nwere ike ghara inwe gị azụ na akụkụ Akwụkwọ Nsọ, i nwere ike dị ele ya. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi ha, ị ga-agbalị iPhone SMS Iweghachite software.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-ndị a ehichapụ ma ọ bụ efu akụkụ, ị kwesịrị ị na-agbake iMessages, SMS, ozi ederede site na iCloud. N'okpuru ebe a bụ 2 ụzọ i nwere ike na-adabere:
Ngwọta 1: Weghachi iOS Ngwaọrụ na iCloud ndabere (mfe ma ga-akwụsị niile ugbu a data) Ngwọta 2: Wepụ ozi ederede site na An iCloud ndabere File (mfe, mfe na kpọmkwem)
Ngwọta 1: Weghachi iOS Ngwaọrụ na iCloud ndabere (mfe ma ga-akwụsị niile ugbu a data)
Mgbe agbake odide ndị e si iCloud na-kwuru, ihe mbụ na-abịa gị n'uche ga-eweghachiri ozi ederede site na iCloud ndabere faịlụ, nri? Ok, nke a bụ ihe mere ndị mmadụ ndabere ha iOS ngwaọrụ iCloud. Otú ọ dị, tupu ị na-ala ọrụ, na m ga-echetara gị na site n'ime nke a, ihe niile data ugbu a ẹdude na gị iOS ngwaọrụ ga-ehichapu ya. Na nke a, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ndị dị mkpa data, biko mee ka a ndabere ma ọ bụ ozugbo agbalị Ngwọta 2 nke na-adịghị mmetụta ọ bụla gị ugbu a data.
Nzọụkwụ 1. pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala. (Ọ bụrụ na ị ka a passcode, mgbe ahụ, a window ga-gbapụta, na-arịọ gị ịbanye nri passcode.)
Nzọụkwụ 2. Mgbe erasing gị niile iOS data, na windo ga-gbapụta, na-enye gị nhọrọ Weghachi si iCloud ndabere. Họrọ ya na banye na iCloud na gị Apple ID. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara nke kọntaktị gị chọrọ ozi ederede na weghachite iOS ngwaọrụ na ya.
Ngwọta 2: Wepụ ozi ederede site na An iCloud ndabere File (mfe, mfe na kpọmkwem)
Kama ikwe ka ị na-agbake ozi ederede site na iCloud ndabere faịlụ, Apple-achọ ka ị weghachi gị iOS ngwaọrụ ihe dum iCloud ndabere faịlụ, nke na-eweta data adịkwa ọzọ. Luckily, ugbu a na ị nwere ọhụrụ nhọrọ - Wondershare Dr.Fone maka iOS, nke ga-agbake ozi ederede site na iCloud ndabere faịlụ na-enweghị erasing gị iOS ngwaọrụ.
Wepụ Texts na mkparịta ụka si iCloud ndabere faịlụ;
Export ozi ederede site na iCloud ndabere faịlụ dị ka printable HTML, XML ma ọ bụ TXT faịlụ
Zọpụta niile ozi ederede Mgbakwụnye;
3-Nzọụkwụ Guide maka Olee naghachi iMessage / ozi ederede site na iCloud ndabere
Ị nwere ike ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na wụnye ya. Dị nnọọ download nri version n'ihi na sistemụ arụmọrụ na kọmputa gị. Mgbe ahụ, malite ya ozugbo.
Nzọụkwụ 2 Download iCloud ndabere na iOS ngwaọrụ
Pịa naputa site na iCloud ndabere File, taabụ na nri. Abanye na na gị Apple ID ma ọ bụ iCloud akaụntụ. Ebe a Wondershare Dr.Fone maka iOS mgbe nakọtara ọ bụla nke gị na ozi akaụntụ, ma na-egosipụta iCloud ndabere faịlụ na-akpaghị aka n'ihi na ị. Ọzọ, họrọ iCloud ndabere nke e dere gị ozi ederede na pịa Download n'akụkụ aka nri. Na mmapụta ahụ, họrọ ibudata Ozi na Message Mgbakwụnye.
Nzọụkwụ 3 Naghachi ozi site na iCloud
Pịa iṅomi ka usoro ihe omume iṅomi gị iCloud ndabere faịlụ. N'oge usoro, Wondershare Dr.Fone ga-etinye gị ederede ozi na udi nke Ozi na ekpe sidebar. All ozi Mgbakwụnye ga-etinye na Message Mgbakwụnye. Ị nwere ike pịa ekpe sidebar ka ịhụchalụ ozi niile na ozi Mgbakwụnye. Na pịa Naghachi iji weghachite ozi site na iCloud ndabere.
Olee otú Naghachi Songs si iCloud
Amaghị otú naghachi songs si iCloud? Ọ bụ ezie na n'adịghị kọntaktsị, kalinda, foto na vidiyo na igwefoto Roll na-kwadoo na iCloud ndabere, songs ike ka a natara site iCloud kwa, ma n'ụzọ dị iche. Gị niile zụrụ songs na iTunes Store ma ọ bụ App Store na-azọpụta on iCloud kwa. Mgbe ị ihichapụ music ezighị, ị nwere ike naghachi music si iCloud site na nbudata ha ọzọ. Lee ndị nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ Wi-Fi, na-eme n'aka netwọk bụ anụ;
Nzọụkwụ 2. Kpatụ iTunes Store ngwa gị iOS ngwaọrụ
Nzọụkwụ 3. abanye na na gị Apple ID na pịa "Ọzọ" na ala nke window.
Nzọụkwụ 4. Pịa zụrụ taabụ ma họrọ Music. Na mgbe ahụ a ndepụta niile songs zụrụ na gị Apple ID ga-apụta. Pịa download button esote onye ọ bụla song re-ibudata ya.
Nke a bụ otú naghachi songs si iCloud. Ọ bụ nnọọ dị iche iche si naghachi kọntaktị, foto, kalenda, ndetu na ozi site na iCloud. Ma na nke a na-arụ ọrụ maka iTunes zụrụ songs. Ọ bụrụ na ụfọdụ furu efu songs na-adịghị zụrụ iTunes Store, ị ga-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS naghachi efu songs si gị iOS ngwaọrụ ozugbo.
Olee otú Naghachi Kọrọ ma ọ bụ zụrụ Videos si iCloud
Ị nwere ike chọpụtara na videos zụrụ iTunes Echekwala na dere site onwe gị na-echekwa iche iche ebe. Kọrọ videos na-echekwa na Igwefoto Roll, ebe gbajie foto bụ. Videos na igwefoto Roll nwere ike kwadoo na iCloud ndabere. Otú ọ dị, zụrụ videos-apụghị kwadoo ka iCloud ndabere, ma na zụrụ nchekwa. Luckily, ma dere na zụrụ vidio ndị recoverable si iCloud. Ego nkọwa n'okpuru:
Part 1. naghachi Kọrọ Videos si iCloud Part 2. Naghachi zụrụ Videos si iCloud
Part 1. Naghachi dere Videos si iCloud
Ihu ọma, e nwere 2 ụzọ naghachi dere vidiyo si na iCloud ndabere faịlụ: weghachi iOS ngwaọrụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara wepụ nanị vidiyo si na iCloud ndabere. Pịa taabụ iji lelee nkọwa
Selectively Naghachi vidiyo si na iCloud
Naghachi Videos si iCloud site Iweghachi ngwaọrụ
Otú a adịghị achọ na ị nwere gị iOS ngwaọrụ na aka, ma iCloud akaụntụ. Usoro ihe omume anyị na-aga iji - Wondershare Dr.Fone maka iOS ga-wepụ vidiyo si na iCloud nkwado ndabere na mpaghara naghachi vidiyo si na iCloud ndabere gị na kọmputa. Mgbe e mesịrị, ị ga-enwe ka mmekọrịta ha gị iOS ngwaọrụ site iTunes.
Nzọụkwụ 1. Download Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ software naghachi vidiyo si na iCloud ndabere. Ma Windows na Mac na nsụgharị ndị dị. Ị kwesịrị ị na ibudata nri version maka kọmputa gị. Wụnye na ẹkedori ya.
Nzọụkwụ 2. Download iCloud ndabere faịlụ
Pịa "naputa site na iCloud ndabere File" n'elu nke isi window. Banye iCloud na gị Apple ID. Ọzọ, a video mgbake usoro ihe omume ga-achọpụta rụọ gị iCloud ndabere faịlụ na-egosipụta na ha na window otu-site na otu. Pịa Download n'akụkụ nkwado ndabere na mpaghara nke nwere videos ị chọrọ iji naghachi. Na mmapụta window, ego Igwefoto Roll (ebe e dere videos bụ).
Nzọụkwụ 3. Naghachi vidiyo si na iCloud
Ọ pụrụ iri a nkeji ole na ole ibudata iCloud ndabere faịlụ. Echegbula onwe gị, nwee ndidi. Mgbe ahụ, pịa iṅomi ka omume na-iṅomi iCloud ndabere faịlụ na idozi faịlụ maka gị. E mesịrị, na-ekpe sidebar, ị nwere ike pịa Igwefoto Roll ma ọ bụ App Videos iji lelee Natara videos.
Iweghachi iOS ngwaọrụ iCloud ndabere ga-esi na vidio ndị a ị na kwadoo ka iCloud azụ. Ma niile ugbu a ẹdude data ga-ehichapu ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, tupu-eme weghachi, ị ga-ndabere ugbu a data ka iCloud kwa.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ Wi-Fi, hụ na a anụ netwọk.
Nzọụkwụ 2. pịa Ntọala> Genera> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na na ntọala gị na iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. Na mmapụta window, mgbata Weghachi si iCloud ndabere> Nbanye na iCloud na gị Apple ID> ịhọrọ iCloud ndabere ka weghachi.
Part 2. Naghachi zụrụ Videos si iCloud
Ọ bụrụ na gị furu efu videos ndị a na-zụrụ iTunes Store ma ọ bụ App ụlọ ahịa, ị nwere ike naputa ha si iCloud nchekwa kwa. Lee ndị nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 2. Kpatụ iTunes Store ngwa gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka na enweta na Ọzọ na ala nke window.
Nzọụkwụ 3. Abanye na na gị Apple ID. Pịa zụrụ taabụ ma họrọ Movies ma ọ bụ TV na-egosi. Pịa obere ígwé ojii n'akụkụ ọ bụla video ka redownload ya na gị na ngwaọrụ. Ọ bụ ya.
Olee otú Naghachi Kalinda si iCloud
"M na-ehichapụ m kalenda na m iPhone. O nwere ihe nile m nhọpụta, ná nzukọ ndị ọzọ oge. M kwadoo m iPhone ka iCloud. Enwere ohere naghachi m kalenda ụdị iCloud? Biko nyere. "
Kalinda dị ezigbo mkpa n'ihi na ndị mmadụ, karịsịa n'ihi na ọrụ n'aka ndị mmadụ. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ mgbe ị na-ekwu ka ihichapụ ihe omume, i nwere ike ihichapụ dum kalenda. Na nke a, ọ bụrụ na ị kwadoo gị iOS ngwaọrụ, ma na iTunes ma ọ bụ iCloud, i nwere ike igosi Kalinda mgbake. Na-esonụ, m ga-eso 2 mfe ụzọ na gị maka otú naghachi Kalinda si iCloud:
Ngwọta 1. selectively Naghachi Kalinda si iCloud Ngwọta 2. Weghachi iOS Ngwaọrụ naghachi Kalinda
Ngwọta 1. selectively Naghachi Kalinda si iCloud
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iweghachi gị iOS ngwaọrụ na otu agadi iCloud ndabere faịlụ, ị nwere ike ịdabere na Wondershare Dr.Fone maka iOS (desktọọpụ software) ịrụ Kalinda mgbake si iCloud. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ.
Download Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac). Wụnye ya na gị na kọmputa na-ẹkedori ya. Ke isi window, pịa ikpeazụ taabụ "naputa site na iCloud ndabere File".
Nzọụkwụ 2 Download iCloud ndabere
Banye na gị iCloud akaụntụ na gị Apple ID na isi nwaanyị di ya nwụrụ. Na mgbe ahụ a usoro ga-chọpụta na-egosipụta na gị niile iCloud ndabere faịlụ otu-site na otu. Họrọ onye na e dere na kalenda gị na ị chọrọ iji naghachi na ibudata ya. Na mmapụta window, i nwere ike na-ahọrọ Kalinda & Ncheta ibudata.
Nzọụkwụ 3 weghachite Kalinda si iCloud
Pịa iṅomi ka usoro ihe omume wepụ kalenda si iCloud ndabere nke ị na-na na ebudatara. N'oge usoro, ị pụrụ ịhụ faịlụ niile na-ota n'ime udi. Ị nwere ike pịa na kalenda ekpe sidebar ka ịhụchalụ Kalinda na ị chọtala. Na, na, pịa Naghachi mbupụ faịlụ gị na kọmputa.
Ngwọta 2. Weghachi iOS Ngwaọrụ naghachi Kalinda
Ụzọ ọzọ na-agbake kalenda si iCloud bụ iweghachi gị iOS ngwaọrụ a na iCloud ndabere nke e dere na kalenda gị mkpa. Ezie na m na-adịghị amasị nwere ike ikwu otú a, ọtụtụ ndị ka na-ahọrọ ya. Mgbe niile, ọ bụ ukara ụzọ naghachi kalenda, kọntaktị, ntọala, faịlụ na igwefoto Roll, wdg si iCloud.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ netwọk, a anụ netwọk.
Nzọụkwụ 2. On iPhone, iPad ma ọ bụ iPod, pịa Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala. Ọ ga-ewe gị ole na ole sekọnd ihichapu niile data na gị iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. Mgbe erasing niile data na gị iOS ngwaọrụ, a ọhụrụ window Pop elu, ikwe gị iji weghachi ngwaọrụ gị. Họrọ Weghachi si iCloud ndabere. Banye iCloud na gị Apple ID. Site iCloud ndabere faịlụ ndepụta, họrọ nkwado ndabere na mpaghara gị mkpa ma weghachi gị iOS ngwaọrụ na ya.
Naghachi Notes si iCloud - 2 Ụzọ bụ ndị i Hand
Mgbe ụfọdụ, i nwere ike ihichapụ ndetu si gị iPhone, iPod, na iPad onkonshiosli, dị ka ọnọdụ m kwuru na otú ka ihichapụ ndetu si iPhone. Na nke a, ị ga-ndabere gị ndetu iCloud mgbe nile, na-ezere ndetu furu efu. Mgbe ọ bụla ị na-ahụ gị na ndetu na-efu, ị nwere ike naghachi ndetu si iCloud ndabere. N'okpuru ebe a bụ 2 ụzọ maka otú naghachi ndetu si iCloud.
Ngwọta 1. weghachite ndetu si iCloud site Iweghachi gị iOS ngwaọrụ iCloud ndabere Ngwọta 2. Naghachi ndetu si iCloud site adịrị ndetu si iCloud ndabere Atụmatụ na usoro maka otú na-Notes Nchekwa
Ngwọta 1. weghachite ndetu si iCloud site Iweghachi gị iOS ngwaọrụ iCloud ndabere
Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod ka iCloud na gị na ndetu na-adịbeghị anya, mgbe ị nwere ike weghachite ndetu si iCloud site Iweghachi gị iOS ngwaọrụ iCloud ndabere. I kwesịrị ịma na iCloud retains 3 kasị nso-nso backups, na-eme n'aka na nkwado ndabere na mpaghara nke e dere gị na ndetu bụ na kasị nso-nso atọ backups.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ a anụ netwọk.
Nzọụkwụ 2. On ngwaọrụ gị, pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
Nzọụkwụ 3. Mgbe erasing niile data na gị iOS ngwaọrụ, mgbe a ọhụrụ window Pop elu , họrọ Weghachi si iCloud ndabere. Banye iCloud na gị Apple ID. Na iCloud ndabere ndepụta, họrọ nkwado ndabere na mpaghara gị mkpa ma weghachi gị iOS ngwaọrụ na ya.
Ngwọta 2. Naghachi ndetu si iCloud site adịrị ndetu si iCloud ndabere
Iweghachi ndetu si iCloud bụ a n'ọtụtụ ebe etinyere ụzọ naghachi ndetu si iCloud. Otú ọ dị, i nwere ike hụrụ na mgbe ị na-eme weghachi, niile data na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ga-ehichapu ya. Ọ dịghị mkpa ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa data na gị iOS ngwaọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi ndetu si iCloud ndabere na na-na nke ugbu a dị mkpa data kwa, mgbe ahụ i nwere na ihu a nsogbu. Dabara nke ọma, ugbu a, ị nwere ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (a desktọọpụ ngwá ọrụ) wepụ ndetu si iCloud ndabere, na-azọpụta mkpa ndetu gị na kọmputa. N'okpuru ebe a bụ 3 mfe nzọụkwụ.
Pịa naputa site na iCloud ndabere File, taabụ na nri. Abanye na na gị Apple ID ma ọ bụ iCloud akaụntụ. Ebe a Wondershare Dr.Fone maka iOS mgbe nakọtara ọ bụla nke gị na ozi akaụntụ, ma na-egosipụta iCloud ndabere faịlụ na-akpaghị aka n'ihi na ị. Ọzọ, họrọ iCloud ndabere nke e dere gị na ndetu na pịa Download n'akụkụ aka nri. Na mmapụta ahụ, họrọ ibudata Notes.
Nzọụkwụ 3 Naghachi ndetu si iCloud
Pịa iṅomi ka usoro ihe omume iṅomi gị iCloud ndabere faịlụ. N'oge usoro, Wondershare Dr.Fone ga-etinye gị na ndetu na udi nke edeturu na ekpe sidebar. Ị nwere ike pịa ekpe sidebar ka ịhụchalụ niile ndetu. Na pịa Naghachi iji weghachite ndetu si iCloud ndabere. Na mmapụta ahụ, ị nwere ike họrọ naghachi ndetu gị na kọmputa na-nri gị iOS ngwaọrụ.
Atụmatụ na usoro maka otú na-Notes Nchekwa
Olee otú iji zere iCloud ihichapu gị na ndetu na iOS ngwaọrụ: Your iCloud erases gị na ndetu na iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, ukwuu n'ime n'ihi na unu nọ na-aka na iCloud. Ọ bụrụ na ị na-iCloud banyere, na mgbe ahụ mgbe ọ bụla ị imelite gị na ndetu na gị iOS ngwaọrụ, ha ga-emelitere na iCloud kwa.
Ndabere ndetu: e wezụga iCloud, ụfọdụ akaụntụ email-enye gị ohere ka mmekọrịta ihe si gị Notes ngwa gị iOS ngwaọrụ akaụntụ email. Mgbe e mesịrị i nwere ike ele ihe ndị a na Notes ngwa na OS X on Mac ma ọ bụ na Notes nchekwa na gị email-ahịa. Na nke a, ọ bụghị a ọjọọ echiche ndabere ndetu akaụntụ email, nri?
> Resource> iCloud> Olee otú iji weghachite Data si iCloud ndabere File